को’रोना अपडेटः विश्वभरी दुई करोड २२ लाख संक्र’मित, एकै दिन…
इरा,नले आफ्नो उ,च्च सै,निक अधिका,रीको ह,त्याको बदलामा ब्या,लिस्टिक…
Uncategorized अपराध अर्थ खेलकुद धार्मिकख खबर पत्रपत्रिका प्रवास खबर
एजेन्सी, ४ भदौ । भारतमा विवाह गर्न नमानेको भन्दै प्रेमीले आफ्नै प्रेमिकाको ह'त्या गरेका छन्। उत्तरप्रदेशको आगरामा २६ वर्षीया डा. योगिता गौतमको ह'त्या गरेको आरो'पमा प्रहरीले उनका प्रेमी डा. विवेक तिवारीलाई प'क्राउ गरेको हो। एसएन मेडिकल…
एजेन्सी, ४ भदौ । यूईएफए च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा जर्मन च्याम्पियन बायर्न म्युनिख र फ्रान्सेली च्याम्पियन्स पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) भिड्ने भएका छन् । बायर्नले बुधबार राति भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा लियोनलाई ३-० ले पराजित गर्दै फाइनलमा…
एजेन्सी,४ भदौ । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित भदोही जिल्लामा दुई दिन पहिला बेप'त्ता भएकी किशोरीको श'व नदीको किनारमा फे'ला परेको छ । १७ वर्षकी किशोरीलाई गाउँमै रहेको एक व्यक्तिले बला'त्कार गरि ते'जावले जलाएर ह'त्या गरेको उनको परिवारले आरो'प…
घाँस का’ट्न नेपाल छिरेका भारतीय महिलामाथि प्रहरीलाई शं’का लागेर चेक’जाँच गर्दा…
PP	 Aug 19, 2020 0
एजेन्सी, ३ भदौ । अस्थायी प्रहरी पोष्ट महादेवपट्टीबाट प्रहरी सहायक निरिक्षक मनोज कुमार सिंहको कमाण्डमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरुलाई गौर नगरपालिका वडा नं. ३ महादेवपट्टीस्थित दशगँजा क्षेत्रमा पक्रा'उ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले…
एजेन्सी – संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनबीच हप्तामा आठ वटा हवाई उडान सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । अमेरिकी यातायात विभागद्वारा जारी वक्तव्यअनुसार अहिलेसम्म चार वटा मात्रै उडान हुँदै आएकोमा अबदेखि हप्तामा ८ उडान गर्ने सहमति भएको हो । नयाँ…
सलमान खानको ह’त्याको योजना बनाएपछि….
मुम्बई – भारतीय कलाकार सलमान खानको ह'त्याको योजना बनाएको आरो'पमा प्रहरीले एक जनालाई प'क्राउ गरेको छ । राहुल नाम गरेका व्यक्तिले गत जनवरीमा सलमान खानको रेकी गरेका थिए । उनले ग्याङस्टर लोरेन्स बिस्नोइका लागि काम गर्ने गरेको बताइएको छ । योसँगै…
खुसीको खबर ! आफ्ना नागरिकलाई को’रोना खोप निःशुल्क गर्ने अस्ट्रेलियाको घोषणा
काठमाडौं,३ भदौ । अस्ट्रेलियाले को'रोना भा'इरस (कोभि'ड–१९) विरु'द्धको खोपको परीक्षण सफल भएको खण्डमा आफ्ना सबै नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । साथै मुलुकभर यो खोप अनिवार्य पनि गरिनेछ । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मौरिसनले यसका…
को’रोनाले विश्वलाई नै अहिले हा’यलकायल बनाएको अवस्थामा, को’रोनाको उद्गमस्थल ऊहानमा…
एजेन्सी । विश्वभर म'हामारीका रुपमा फैलिरहेको को'रोना म'हामारीको उद्गमस्थल चीनको ऊहानमा एक पुल पार्टी (स्विमिङ पुल) ले यसबेला सबैका ध्यान खिचेको छ । सो पार्टीका तस्बिरहरु अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल भैरहेका छन् । उक्त पार्टीमा हज्जारौं…